China umhlaba omanzi womgubo weplan mveliso kunye nabathengisi IHuajing
I-Huajing yeplastiki ekumgangatho we-mica powder, esetyenziselwa ubukhulu becala iiplastikhi zobunjineli ukwandisa imodyuli yokugoba kunye nokuguquguquka; Kwintsimi yezinto zeplastiki zeemveliso ze-elektroniki, emva kokongeza i-mica, zinokucokiswa ngakumbi ngokudibanisa noyilo. inokuphucula ukumelana nemozulu kweemveliso zeplastiki, ukuze iiplastiki zobunjineli zikwazi ukumelana neqondo lobushushu kunye nokwahluka kwendalo;
I-Weta Mica (Izinto eziSebenzayo)
Intle Umbala Mhlophe (ilebhu) Particle Ubungakanani (μm) Ucoceko (%) Izinto eziziMagnetic (ppm) Ukufuma （%） I-LOI (650 ℃) Ph Osbestos Icandelo elinensimbi enzima Ubuninzi be-denisty (g / cm3)
Mica emanzi a Izinto eziSebenzayo）
W-100 Isilivere emhlophe ＞ 82 125 Ukuyalela 99,7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5.5.5.5 7.8 HAYI 10ppm 0.22
W-200 Isilivere emhlophe ＞ 82 70 Ukuyalela 99,7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5.5.5.5 7.8 HAYI 10ppm 0.19
W-400 Isilivere emhlophe ＞ 83 46 Ukuyalela 99,7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5.5.5.5 7.8 HAYI 10ppm 0.16
W-600 Isilivere emhlophe Ukufikelela kwi-86 23 Ukuyalela 99,7 ＜ 100 ＜ 0.5 4.5.5.5.5 7.8 HAYI 10ppm 0.12
SiO2 Al2O3 K2O I-Na2O MgO CaO TiO2 YFOO3 PH
48.5 ~ 50% 30 ~ 34% 8.5 ~ 9.8% 0.6 ~ 0.7% 0.53 ~ 0.81% 0.4 ~ 0.6% 0.8 ~ 0.9% 1.5 ~ 4.5% 7.8
Umsebenzi ophambili weMika
I-Huajing yeplastiki ekumgangatho we-mica powder, esetyenziselwa ubukhulu becala iiplastikhi zobunjineli ukwandisa imodyuli yokugoba kunye nokuguquguquka; Kwintsimi yezinto zeplastiki zeemveliso ze-elektroniki, emva kokongeza i-mica, zinokucokiswa ngakumbi ngokudibanisa noyilo. inokuphucula ukumelana nemozulu kweemveliso zeplastiki, ukuze iiplastiki zobunjineli zikwazi ukumelana neqondo lobushushu kunye nokwahluka kwendalo; kuphucula kakhulu ubushushu ukuqinisekisa ukuthembakala kokusebenza kombane ophezulu; Inokuphucula ukubhobhoza kweemveliso ezithile zeplastiki ngokunjalo.
Umhlaba omanzi we-mica powder usetyenziselwa ukucoca izinto ezingafunekiyo ngamanzi kunye nokugaya ngamanzi njengephakathi, umgubo womhlaba omanzi uneempawu ezigqwesileyo kunomgubo owomileyo owomileyo, njengobumhlophe obulungileyo, umphezulu ogudileyo, ubungqongqo obuncinci, ubume obuqhelekileyo, ubukhulu obukhulu Umlinganiselo wobungakanani, njalo njalo.
Ukusetyenziswa kweMika kwiHDPE
Ukongezwa kwe-mica kwi-HDPE kunokunciphisa ukugcwala kwezixhobo, ke kufanelekile ukuba kwenziwe zonke iintlobo zezikhongozeli, ezinje ngetanki lamafutha emoto njalo njalo. Imodyuli ye-shear engeyiyo yenqwelomoya ye-HDPE / mica composites inyuka kakhulu ngokunyuka komlinganiso weemakhishithi ze-mica, ngelixa i-modulus engeyiyo yenqwelomoya incipha kancinci. Iindidi zeHDPE ezizaliswe ngumgubo we-mica zineempawu ezibanzi ezibanzi zoomatshini. Ngokunyuka kwenani le-mica powder, amandla okuqina, amandla okugoba kunye nokuguqa imodulus yezinto ezidibeneyo zanda.
Ukusetyenziswa kweMicah Powder kwiABS
I-ABS isetyenziswe ngokubanzi kwizithuthi, kunxibelelwano, kwi-elektroniki, kukhuseleko lwesizwe nakwezinye iinkalo. Emva kokongeza i-mica kwiiplastiki zobunjineli ze-ABS, ukuqina, ukunxiba ukumelana kunye nozinzo lweekhemikhali ze-ABS zinokuphuculwa ngokwamazinga ahlukeneyo. Xa i-30% mica yongezwa, xa kuthelekiswa ne-ABS emsulwa, iindleko zemveliso zincitshisiwe malunga ne-20%, kwaye amandla okugoba kunye nokuqina kwento ephuculweyo ngokwahlukileyo. Xa umxholo we-mica ungama-20%, imodyuli yokuguqa yemathiriyeli iphindwe kabini kunaleyo ye-ABS emsulwa.
Okulandelayo: Calcined mica umgubo